Xigasho:Farmaajo oo ka codsaday Midowga Musharaxiinta – Axadle
By Abdiwahab Ahmed	 On Apr 17, 2021
Muqdisho (Axadle) – Madaxweynaha xilka kasii degaya Maxamed C / llahi Farmaajo ayaa markii ugu horeysay codsi u diray Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed.
Axadle ayaa lagu wargeliyay in kulan xalay ka dhacay Villa Somalia oo u dhaxeeyay Farmaajo, Rooble, Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe looga hadlay arrinta muddo kordhinta iyo xiisadda ka soo cusboonaatay axadle, iyadoo Farmaajo u fidiyay Qoor Qoor iyo Cali Guudlaawe.
Codsiga Madaxweyne Farmaajo ayaa ah inuu la kulmo Madaxweynihii hore Xasan Sheekh Maxamuud iyo Shariif Sheekh Axmed si ay ugala hadlaan xaalada siyaasadeed ee dalka.
Waxaa caawa lagu wadaa in kulan ay yeeshaan Madaxweynayaashii hore ee Xasan Sheekh, Shariif Sheekh iyo Madaxweynayaasha Galmudug iyo HirShabeelle.
Si kastaba, Axadle ayaa heshay xog hordhac ah oo sheegeysa in Xasan Sheekh iyo Shariif Sheekh ay u baahan doonaan inay la kulmaan madaxweyne Farmaajo.
Sida laga soo xigtay ilo wareedyo ku dhow madaxweynayaashii ka horeeyay, waxay rabaan inay shuruud ka dhigaan in marka hore Farmaajo uu ka laabto muddo kordhintiisa ugu dambeysay ayna soo saaraan warqad ay ku sharxeyso dhamaadka waqtigiisa, go’aankaas oo ah mid halaag ku dhici doono. Oo isagu ma qaadi karo.
Lama oga waqtigaan waxa uu sameyn doono marka uu shaqada ka tago. Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa inuu la kulmo madaxweynayaashii isaga ka horeeyey maalinta talaadada ah, maadaama dalka uu ku wajahan yahay kacdoon. Khilaafyo horseedi kara burbur qaran.